फुलले सिकाएको पाठ —बिश्वजीत देउजा – Tungoon
होमपेज » मुख्य समाचार » राेचक
फुलले सिकाएको पाठ —बिश्वजीत देउजा
“फुल” यो शब्द नै अत्यन्त कोमल छ । फुलको कोमलताको अगाडि जो कोहि नम्र र शुशिल हुन पुग्दछ । जन्म देखि मृत्यु सम्म मान्छेलाई नभइ नहुने चिज हो फुल । चाहे कसैको जन्मोत्सवमा उपहार दिन होस् वा मृत्युपछि अर्थिमा चढाउन नै किन नहोस फुल सबैको र सँधैका लागि प्रिय हुन्छ। आखिर फुल किन यति प्रिय छ सबैका लागि ? युगौंयुग देखि के शन्देश दिन खोज्दैछ हामीलाई फुलले ?
हामीले हाम्रो वरिपरि हरेक समय जसो विभिन्न किसिमका फुल फुलेको देखेका छौं । हामीले फुललाई देख्नसाथ त्यसले हामीलाई आकर्षित गराउन कत्ति पनि समय लगााउँदैन । चाहे जस्तासुकै समय वा परिस्थिती किन नहोस फुल र्निधक्क सँग फुलिदिन्छ । उसको जिवन नै फुल्नको लागि हो जसका लागि उसले के-के मात्र पो सहेको हुदैन र ? फुलको विरुवा अथवा दाना जब उम्रन्छ उसले खुब पानी,आँधि र चट्याङ सहेको हुन्छ। जब विस्तारै हुर्कदैं जान्छ तब उसले चट्याङ, आँधिवेरी मात्र नभएर मानिसले आफ्नो मुन्टा चुडिदिने डर र बाख्रावस्तुले आफुलाई कतिबेला चपाउने हुन भन्ने डर पनि यथावत नै राखेको हुन्छ। तर फुललाई जसले जतिसुकै धम्कि दिएपनि उ फुल्नबाट कहिल्यै पछि हट्दैन । उसले हरेक परिस्थितीलाई स्वीकार गरेर आफ्नो अन्तिम लक्ष्य फुल्नकै लागि अभिप्रेरीत हुन्छ। फुलको अर्थ वा परिभाषा नै स्वीकार गर्नु हो अथवा भनौं अनेकन वाधा अड्चन सहेर पनि मुस्कुराउनु हो।
त्यस्तै मानिसहरु पनि फुलजस्तै अनेकन आरोहअबरोह सहेर किन मुस्कुराउन सक्दैन त ? किनकि मानिसहरु इन्द्रियको गुलाम भएका छन्। मानीसहरुले भौतिक वस्तुको लालचमा परेर फुलले जस्तै पन्ध्र दिन मात्र भएपनि फुल्नको लागी बाच्नुपर्छ र फुल्नुनै जिवन हो भन्ने भावनाको हत्या गरिसकेका छन्। मनिसहरुले आफ्ना जीवनमा आइपरेका सबै परिस्थितीलाई स्विकार गर्न नसक्दा फुल्न नपाइ ओइलाइ रहेका छन्। मानीसको सौन्दर्य फुल्नु सिवाय केहि छैन। मरभुमि होस वा हिलोमा होस वा त बगैँचामा फुलेको फुल किन नहोस उनिहरुले कहिल्यै एकअर्काको डाहा वा इर्ष्या गरेका छैनन् जहाँ जस्तो अवस्थामा छन् अत्यन्तै कोमलता र हार्दिकताका साथ बाँचेका छन्।
यसरी नै मानीसले पनि सर्वस्विकार्य र हार्दिकताका साथ बाँच्नका लागि फुल जस्तै सुकोमल र निस्वार्थ हुन आवश्यक छ। आउनुहोस हामी पनि फुल जस्तै निर्धक्क भएर बाँचौ ।
• ༄༄ बिश्वजीत देउजा